healthy benefits – Page9– Healthy Life Journal
အဆီလျှော့ထားသည့် ပူတင်းကိုစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
——–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——– နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ သကြားအနည်းငယ်သာ ထည့်ပြီး အဆီလျှော့ကာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပူတင်းကို ရွေးချယ်စားပေးတာကြောင့် အောက်ပါအာဟာရဓာတ်တွေ ရရှိပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ (၁) စွမ်းအင်ရရှိစေခြင်း ပူတင်း ၁၀ဝ ဂရမ်စားတာကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့်...
မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်သန့်ဆေးများအကြောင်း
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– Q. ဆရာ . . မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်သန့်ဆေးဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာ ရောင်းနေကြတာတွေက ယုံကြည်သင့်ပါသလား။ အဲလိုဆေးနဲ့ကုရင် ကျဉ်းတာ၊ သန့်တာတွေ တကယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။ ဒီဆေးတွေက ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ...
အရွယ်ရလာချိန် ဖြစ်တတ်သော ဝေဒနာတို့အား ဖြေရှင်းနည်းများ
——–၊ လရိပ်မေ ၊——– ဒီနည်းလမ်းတွေက နာမည်ကြီးဆရာဝန် Dr.Oz ရဲ့ အရွယ်ရလာချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို ဟန့်တားကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု နှေးနေပြီလား အစာစားချိန် တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြားမှာ စားနိုင်ဖို့ လက်ထဲမှာ မုန့်ဆောင်ထားပါ။ ဒါဆိုရင်...
ညက်အောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူကို စားခြင်းဖြင့် ရနိုင်သောကောင်းကျိုးများ
——-၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- (၁) အယ်လီစင်ကြောင့် နှလုံးရောဂါအမောဖောက်ခြင်းအား ကာကွယ်ပေးနိုင် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အယ်လီစင်ဟာ ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းပြီးမှသာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ဒီဓာတ်ဟာ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါအမောဖောက်တာ (Heart Attack)နဲ့ လေဖြတ်တာတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (၂) သွေးတိုးကို...
——-၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- ယားယံပြီး နီမြန်းနေတဲ့ အင်ပြင်အဖုတွေကို အောက်ပါအိမ်တွင်းကုထုံးတွေသုံးပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။ (၁) အအေးဝတ်ကပ်ခြင်း အင်ပြင်ကြောင့် ယားယံနီမြန်းမှုဖြစ်တဲ့အခါ ဝေဒနာသက်သာစေဖို့ ရေအေးဝတ်ကပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ရေအေးနဲ့ ရေချိုးတာတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အအေးဓာတ်ဟာ သွေးကြောတွေကို ကျုံ့စေပြီး...
ကော်ဖီက ကောင်းတာလား၊ ဆိုးတာလား
—————၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—————- Q. တချို့လူတွေက ကော်ဖီကောင်းတယ်၊ တချို့က မကောင်းဘူး စသဖြင့် အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာကြောင့် ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး အကောင်း၊ အဆိုးကို တိတိကျကျ သိချင်ပါတယ်။ A. ကော်ဖီသီးသန့်က ကယ်လိုရီတော့မပါဘူး။ ကယ်လိုရီမပါတဲ့အတွက်...
သက်သတ်လွတ်စားတာကြောင့် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်သလဲ
————–၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—————– သက်သတ်လွတ်စားတယ်ဆိုတာ တိရစ္ဆာန်အသားတွေကိုမစားဘဲ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကိုပဲစားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ် ၂၂ မျိုးပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်သတ်လွတ်စားတဲ့အခါမှာ အသားကနေ ပရိုတင်းဓာတ်ကို မရရှိနိုင်တာကြောင့်...